XYZPrinting 3D nyocha nyocha | Akụrụngwa n'efu
Mgbe anyị na-atụle ịmepụta ihe 3D, ihe mbụ na-abata n'uche maka ọtụtụ ndị ọrụ bụ inwe ike i scanomi ihe ndị dị na Real World ka ha dijitalụ ma nwee ike ịme mgbagha na mgbanwe na gburugburu ebe obibi dijitalụ. Enweela ihe ngwọta dị iche iche n'ahịa ruo ogologo oge iji nwee ike digitize ezigbo ihe.
N'oge a anyị ga-enyocha ihe akụrụngwa nke onye na-emepụta XYZPrinting nyere. a handheld 3D nyocha, dị mfe iji na anyị nwere ike ibufe ebe ọ bụla.
1 Tụnyere nke yiri ngwaahịa
2 Akụkụ teknụzụ na nkọwapụta nke XYZPrinting 3D nyocha
4 Sistemụ arụmọrụ, ihe achọrọ na njikọta
5 Ntinye na inye ọrụ
6 Ogo nke nyocha a nwetara
Tụnyere nke yiri ngwaahịa
O siri ike ịmepụta nyocha nke ngwaahịa n'ihi na enwere ndị nrụpụta ole na ole na-anwa anwa ịre ngwaọrụ nke ụdị mgbagwoju anya a na njirimara ya na gburugburu ụlọ na nke ọkachamara. N'ime akụrụngwa anyị tinyeworo na ntụnyere, 2 n'ime ha ka emebere iji nyochaa ihe ndị fọdụrụ na nyiwe na-agbagharị. Na nyocha BQ (na anyị enyochaburu) akwụsịla.
Pricegwọ nke XYZPrinting 3D nyocha na-etinye ya dị ka ọnụ ala ngwaahịa nke ntụnyere. Ọzọ, anyị ga-enyocha ma ọ ga-arụ ọrụ na teknụzụ na atụ anya atụmanya ndị ọ mepụtara maka anyị.
Akụkụ teknụzụ na nkọwapụta nke XYZPrinting 3D nyocha
Nke a handheld nyocha dabere na teknụzụ Intel RealSense, teknụzụ a nwere isi jikọtara igwefoto infrared iji weghara omimi nke ihe nyocha na igwefoto HD iji weghara textures. N'ikwu eziokwu, usoro a dị mgbagwoju anya ebe ọ bụ na akụrụngwa n'onwe ya bụ ọrụ maka ịmịpụta ọkụ nke infrared nke ọ na-akọwazi ntụgharị ndị kamera infrared weghaara ma jikọta ma dozie data enwetara site na algorithm nke na-eji data sitere na nke a igwefoto na igwefoto HD.
Nkà na ụzụ a nwere ọnụ ọgụgụ na-enweghị ngwụcha nke ngwa na XYZPrinting etinyela ya n'ọrụ maka ịmepụta obere akụrụngwa nke ọ tinyelarị igwefoto Intel F200. N'ebe ọwụwa anyanwụ magburu onwe ngwaike soro ya dị mfe iji sọftụwia nke ahụ ga - enyere anyị aka inweta ngwa ngwa dijitalụ ngwa ngwa nke ndị na - enyocha na World World.
Emeputa kere a nyocha na a mara mma nke ukwuu. Ọ na - agwakọta agwakọta na - acha uhie uhie na - acha odo odo n’egwuregwu kọlọji na ergonomic nke anyị ji naanị otu aka jide ma rụọ ọrụ. Ahụ nke nyocha ahụ na - etinye bọtịnụ ga - enyere anyị aka ịmalite ma kwụsị usoro nyocha.
Ezubere nkọwa ndị a ka ọ bụrụ anyị nwere ike iji akụrụngwa jiri otu aka rụọ ọrụ, na-ahapụrụ anyị aka nke ọzọ iji PC ma rụọ ụfọdụ nhọrọ dịka ịchekwa imewe anyị na ikwugharị nyocha ahụ ma ọ bụrụ na anyị enweghị afọ ojuju na nsonaazụ ahụ.
Igwe nyocha jikọọ na PC site na eriri ihe dị ka Ogwe 2. Ọ bụrụ n ’ị gaje i scanomi site na iji PC desktọọpụ, ị nwere ike ịgaworị ịchọ ndọtị n’ihi na oge ụfọdụ ọ na-ada obere obere.
Na a i scanomi olu oscillating n'etiti 100x100x200 cm na 5x5x5 cm ohere ndị a enweghị njedebe ma anyị ga-enwe ike i fromomi site na obere ihe na ọrụ nkà.
La mkpebi omimi n'etiti 1 na 2,5 mm Ọ na-emesi anyị obi ike na ihe ndị a digitized ga-ekwesị ntụkwasị obi na nke mbụ, mana ikekwe nkọwa a adịghị adabara maka ngalaba ndị na-arụ ọrụ na gburugburu ọrụ nke ejiri micron ma ọ bụ ọbụlagodi site na milimita tụọ ya. Inweta ezigbo nsonaazụ nyocha ahụ ga-adị n'etiti 10 na 70 cm site na ihe nlere ka a nyochaa, anyị ga-eleba anya na nke a mgbe anyị na-enyocha ọtụtụ ihe yana ịnwe ezigbo eriri USB dị maka ịgafe ihe ahụ.
Sistemụ arụmọrụ, ihe achọrọ na njikọta
Ojula anyi anya etu osi acho ihe pere mpe anyi kwesiri iji akụrụngwa. Na nke anyị, anyị enwebeghị ike iji igwe nyocha a na kọmputa zụtara n'ọfịs afọ atọ gara aga na anyị kwesịrị ịchọta otu nke Kacha ọhụrụ na-etinye USB 3.0 ọdụ ụgbọ mmiri.
Dị ka onye nrụpụta si kwuo, nkọwa ndị a tụrụ aro bụ:
Processor: Ọgbọ nke anọ Intel® Core ™ i5 ma ọ bụ emechaa
8 GB nke RAM
NVIDIA GeForce GTX 750 ti ma ọ bụ ka mma na 2GB RAM
Agbanyeghị Easiestzọ kachasị mfe iji chọpụta ma ọ bụrụ na anyị nwere kọmpụta nwere ike ịme nyocha ahụ bụ ịgba ọsọ software (ị ga-edebanye aha iji budata ya) na emeputa na-eme ka onye ọ bụla mara ya.
Ntinye na inye ọrụ
Na ọdịnaya ngwaahịa a na-enye kaadị SD na sọftụwia ahụ na anyị ga-wụnye. Agbanyeghị, anyị na-akwado ka ibudata ụdị nke kachasị ọhụrụ sitere na webụsaịtị ndị nrụpụta. N'ihi na n'oge na-adịbeghị anya, nhọrọ ị nwere ike i toomi nnukwu ihe dị iche iche abanyela.
Usoro nwụnye dị mfe, gaa n'ihu, ana m anabata…. anyị enweela ike ịwụnye n'enweghị nsogbu ọ bụla ọkwọ ụgbọala na-enweghị ịhazigharị nhọrọ ndị na-adịghị ahụkebe.
Ozugbo anyị malitere software nke mbụ anyị juru anyị anya site na mmetụta nke ịdị mfe ya. Ọ dị kensiri ike na ọbụna a nwa nwere ike ime ka ọ na-eje ozi na-enweghị ọtụtụ nsogbu, 3 clicks na anyị nwere anyị mbụ scanned ihe.
Ogo nke nyocha a nwetara
Es dị mfe iji nweta ezigbo nyocha n'ihi na na ngwanrọ n'oge niile ị nwere ike ịlele ọkwa nke usoro nyocha na-emepe ma na-edozi n'oge ma ọ bụrụ na ị mejọrọ. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ebe nsonaazụ kacha mma anyị ga-enweta bụ mgbe anyị na-enyocha ihe ka ibu karịa iko, maka obere akụkụ ọ na-esiri ya ike ịkọwa data.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime ihe atụ anyị nyochara. Site na onye otu ibe gị na igwe friji magnet, ọbụlagodi kaktọs dị n’ime ite gị.
Dịka nkwanye izugbe anyị ga-agwa gị nke ahụ ị ga-emerịrị nyocha ahụ obere obere inye software ka hazie ozi niile ọ na-enweta na nke ahụ ihe a ga-enyocha kwesịrị ịbụ nke ukwuu udo ọma.
Otu ihe dị ịrịba ama nke otu a nwere bụ Nnukwu uru maka ọnụahịa ahụ. Anyị agaghị achọta ngwaahịa na ahịa nke na-ejikọ teknụzụ a na ọnụahịa dị ka ndị otu XYZPrinting.
Ọ bụrụ na anyị agbakwunye na eziokwu a ezigbo ọrụ nke onye nrụpụta rụpụtara mgbe ọ na-emepụta ngwaahịa ahụ yana ọganiihu nke isoro ngwaike ahụ mfe iji software Anyị kwubiri na nke a bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma n'ahịa iji nweta nyocha 3D na ọnụahịa akụ na ụba.
Nyochaa: Tony nke Mkpụrụ osisi
Mfe na arụmọrụ imewe
Mfe iji software
Obere eriri USB
Nnukwu ngwaike chọrọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Nyocha nyocha nke XYZPrinting 3D nyocha